Vaovao - Tombony azo amin'ny fampiasana fonosana boaty firapotsy
Tao anatin'izay taona lasa izay, ny fonosana boaty firapotsy dia nivelatra haingana teo amin'ny tsenan'ny fonosana, ary nitombo ny anjarany. Izy io dia be mpampiasa amin'ny fonosana sakafo, fonosana kosmetika, fonosana fanafody, fonosana simika ary sehatra hafa. Anisan'izany, ny boaty firaketana sakafo dia mitahiry ampahany betsaka, tarihin'ny boaty fanitso dite sy boaty firakotra mofomamy volana. Ny antony fampandrosoana haingana ny fonosana boaty vita amin'ny firaka dia tsy azo sarahina amin'ireo toetra mampiavaka azy. Androany, ny orinasan-tsinina vatan-kazo indostrialy dia mijery ny tombony lehibe azo avy amin'ny fonosana boaty firapotsy amin'ny rehetra.
Voalohany indrindra, raha ny fahitana azy, ny fonosana vifotsy dia manana ny famirapiratany metaly, ary ny vokatra fanontana dia miharihary kokoa noho ny fitaovana fonosana hafa. Rehefa vita pirinty ilay boaty firapotsy dia mamirapiratra sy kanto ny loko, ary toy ny fiainana ny lamina, izay tsy vao mainka mampitombo ny hakanton'ireo entana, fa mampiseho koa fa avo lenta kokoa ny tarehy ary manana tarehy. Noho izany, mpanjifa maro no maniry manokana ireo fanomezana ao anaty boaty firy rehefa misafidy fanomezana.
Faharoa, ny fonosana boaty firapotsy dia vita amin'ny fitaovana tinplate, izay manana fihenan-drivotra tsara kokoa, alokaloka, fihavaozana ary fanoherana fanerena noho ny fitaovana fonosana hafa, ary afaka miaro ny vokatra amin'ny lafiny lehibe indrindra. Ary noho ny fahamendrehana sy ny plastika amin'ny tinplate, ny fonosana boaty firapotsy dia azo ovaina amin'ny endrika isan-karazany, toy ny boaty vita amin'ny boribory boribory, boatin-kazo efajoro toradroa, boatina fanitso miendrika fo, boaty fanitso trapezoidal, ary boaty firavaka hafa tsy manam-paharoa. Mora vita amin'ny lasitra.
Ankoatr'izay, ny fonosana boaty firapotsy dia milamina amin'ny tontolo iainana. Raha ny fanadihadiana ny tsena fanomezana aorian'ny fialantsasatra tato anatin'ny taona vitsivitsy, taorian'ny Fetin'ny Lohataona sy ny Fetin'ny Fahavaratra, dia ambany dia ambany ny tahan'ny fanodinana ny ankamaroan'ny fonosana tsy miaro ny tontolo iainana, ary ny tahan'ny fanodinana boaty vy toy ny tin-mofo mofomamy boaty sy boaty firavaka vatomamy dia mitombo isan-taona. Ny boaty vy dia azo averina madiodio ary ekena ho fonosana maitso sariaka amin'ny tontolo iainana. Ny entana dia fonosina anaty boaty vy, izay tsy vitan'ny manatsara ny kalitaon'ny vokatra fotsiny, fa mitsitsy ihany koa ny loharanon-karena ary mampihena ny fahalotoan'ny tontolo iainana. Noho izany, amin'ny tsena fonosana amin'ny ho avy miaraka amin'ny lohahevitra fiarovana ny tontolo iainana, ny fampiasana fonosana tinplate dia tsy maintsy fironana amin'ny indostrian'ny fonosana.
Fotoana fandefasana: Mar-16-2018
Vata famonosana antsinjarany, Box an'ny mpifankatia ho an'ny sipa, Boaty tin manokana, Face Coin Bank, Boaty haingon-trano latabatra kafe, Tea Tin Box,